Latop ၀ယ်မယ်ဆိုရင် အကြမ်းမျဉ်း သိထားသင့်သော အချက်များ ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Internet Tools , laptop ၀ယ်ယူရာတွင် သိရမည့် အချက်များ » Latop ၀ယ်မယ်ဆိုရင် အကြမ်းမျဉ်း သိထားသင့်သော အချက်များ
Latop ၀ယ်မယ်ဆိုရင် အကြမ်းမျဉ်း သိထားသင့်သော အချက်များ
By နေမင်းမောင်2:39 PM22 comments
ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းလေးကို ရေးချင်နေတာတော့ ကြာပါပြီ .. ဒါပေမယ့် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် အရှိန်ယူလိုက် ပျက်သွားလိုက်နဲ့ မရေးဖြစ် ဖြစ်နေတာပါ .. တကယ်တော့ ဒါက ရေးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာလေး တစ်ခုပါပဲ .. အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ တော်တော်များများ ကွန်ပျူတာနဲ့ အကျွမ်းတ၀င် ရှိလာသလို ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုတဲ့ အခါမှာလည်း အိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ တစ်နေရာထဲမှာပဲ အသုံးပြုနိုင်မဲ့ Destop Computer အစား ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အသုံးပြုနိုင်သလို သွားလေရာ ယူဆောင် သွားနိုင်တဲ့ Latop Computer တွေကိုသာ ပိုပြီးတော့ အသုံးများလာတာ တွေ့ရပါတယ် .. အဲ့ဒီအတွက် အများစုအသုံးများတဲ့ Latop Computer တွေဝယ်တော့ မယ်ဆိုရင် မ၀ယ်ခင် သိထားသင့်တဲ့ လေ့လာထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို နားလည်အောင် အကြမ်းမျဉ်း ရေးပေးသွားပါမယ် ..
နံပါတ် ( ၁ ) အချက်လေးက အားလုံးအတွက် လိုအပ်ပါတယ် .. ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူတန်းစား ပေါင်းစုံရှိပါတယ် .. ချမ်းသာတဲ့သူ ၊ အလယ်အလတ်တန်းစား ၊ ဆင်းရဲတဲ့သူ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ် .. ဒါကြောင့် လက်တော့ မ၀ယ်မှီမှာ မိမိကိုယ်ကိုယ် အရင်ဆုံး ဆန်းစစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် .. ဈေးကြီးပေးရမှ ဒီပစ္စည်းက ကောင်းမယ် ဆိုတာလည်း မမှန်ပါဘူး .. ဒီပစ္စည်းကတော့ ဘာကြောင့် ဈေးကြီးနေတာ ( ဥပမာ ။ ။ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ ပိုပြီးတော့ ဆန်းသစ်နေလို့ အဲ့ဒီအတွက် တန်ဖိုး ပိုကြီးနေတာလား ၊ ဒါမှမဟုတ် အထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Hardware ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကပဲ ကောင်းနေလို့ ဈေးကြီးနေတာလား ) ဒါမှမဟုတ် ဘာကြောင့် ဈေးသက်သာနေတာလည်း ( ဥပမာ ။ ။ အထဲမှာဆင်ထားတဲ့ Hardware ဆိုင်ရာ ဆက်စပ် ပစ္စည်းတွေကတော့ ကောင်းနေပြီး ပုံစံက ပုံတုန်းကြီး ဖြစ်နေလို့လား ၊ အထဲမှာ ဆင်ထားတဲ့ Hardware ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေက အနိမ့်စားတွေ ဆင်ထားလို့လား ဆိုတာကို ) ကွဲကွဲပြားပြား သိဖို့လိုပါတယ် .. ဒါမှသာ မိမိတို့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Latop မျိုးကို သင့်တင့်တဲ့ ဈေးနှုန်းမျိုး ပေးပြီး ၀ယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
အရင်ဆုံး မိမိက Latop ကိုဘာအတွက် ၀ယ်မှာလည်း ဆိုတာကို ဆန်းစစ်ပါ .. ပိုက်ဆံ ချမ်းသာလို့ ငွေဘယ်လောက် ကုန်ကုန် ဆိုရင်တော့ အခုနောက်ဆုံးပေါ် Core i7 Latop မျိုးကို ဒီဇိုင်းပုံစံ လန်းလန်းလေးနဲ့ Brand ကောင်းကောင်း လေးနဲ့ ဈေးကြီး ပေးဝယ်လိုက်တာ ပြသနာ မရှိပေမယ့် ကိုယ်ကလည်း လက်ထဲမှာ ငွေကို ချင့်ချိန်နေရတဲ့သူ တကယ်လည်း လိုအပ်နေပါတယ် ဆိုတဲ့ သူမျိုးအတွက် ကျတော့ အရွေးမမှားဖို့ လိုအပ်ပါတယ် .. ဒါမှသာ မိမိတက်နိုင်တဲ့ ငွေကြေးပမာဏနဲ့ ကိုယ့်အတွက် တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ Latop မျိုးကို ရွေးချယ် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
နောက်တစ်ချက် ကွန်ပျူတာပိုင်း ဆိုင်ရာတွေမှာ သုံးချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူမျိုးကျတော့ ပုံစံဒီဇိုင်း အရမ်း မကောင်း ရင်တောင် Hardware ပိုင်းဆက်စပ် ပစ္စည်းတွေကိုတော့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်တာမျိုးတွေ ကို သုံးသင့်ပါတယ် .. မိမိတို့က ဆော့ဝဲတွေ ရမ်းမယ် စမ်းသပ်ချင်တာ တွေကို စမ်းသပ်မယ် ဖြုတ်မယ် တပ်မယ် ဒေါင်းလော့တွေ ခဏခဏ ချမယ် Upload တွေတင်မယ် ပြီးရင် စက်ကို အမြဲတမ်း ၂၄ နာရီပါတ်လုံး အသုံးပြုဖြစ်နေတဲ့ အခါတွေ ရှိမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မိမိတို့ ၀ယ်မဲ့ကောင်က Hardware ပိုင်း ဆက်စပ် ပစ္စည်း မြင့်တာနဲ့ အကြမ်းခံမဲ့ ကောင်မျိုးကို ရွေးချယ်ပြီး ၀ယ်ယူတာ ကပိုပြီး အဆင်ပြေစေပါလိမ့်မယ် .. ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ Latop မ၀ယ်ပဲ Destop သာဝယ်ပေါ့ဗျာ .. ကျွန်တော်က Latop Crazy ဖြစ်တဲ့ သူအတွက် ရွေးချယ်လို့ရအောင် ပြောပြတာပါ .. ဒီလိုလူမျိုး အတွက်တော့ ဒီဇိုင်းပိုင်းထက် Hardware ပိုင်းစပ်ဆက် ပစ္စည်းတွေ ကောင်းမွန်တာမျိုးကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ် ..
နောက်ဆုံးတစ်ချက် ဂိမ်းသမားတွေကတော့ မိမိတို့ဝယ်မဲ့ လက်တော့မျိုးကို Hardware ပိုင်း သင့်တင့်ပြီး Ram , Graphic ပမာဏ များတာ မျိုးကို ရွေးချယ်ပြီး ၀ယ်ယူထားသင့်ပါတယ် .. အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဆိုရင် Gamer တွေအတွက် သီးသန့် ထုတ်ပေးထားတဲ့ Latop Brand မျိုးတွေကို တောင်တွေ့နေရပါပြီ ..
နောက်တစ်ချက်ကတော့ Latop ၀ယ်မယ်ဆိုရင် Graphic ပါတာကို ရွေးဝယ်မလား Ram အနည်းအများကို ကြည့်ပြီး ၀ယ်မလား ဆိုတာကိုတော့ သိထားသင့်ပါတယ် .. ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ Latop မှာ Ram နည်းရင် ထပ်တိုးလို့ ရပေမယ့် Graphic မပါရင်တော့ ထပ်ြ့ပီး အသစ်စိုက်လို့ မရပါဘူး .. ။ ဒါကြောင့် မိမိတို့က မ၀ယ်ခင်ထဲက မိမိတို့ဝယ်မဲ့ Latop မှာ Graphic ပါသလား မပါဘူးလား ဆိုတာကို လေ့လာသင့်ပါတယ် .. ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒီ အချက်တွေကို ဘယ်လို ကြည့်ကြမလည်း .. အောက်မှာ ဆက်သွားရအောင် ..
နောက်တစ်ချက် Laptop Detail ထဲမှာ Operating System ဆိုပြီး ပါပါလိမ့်မယ် .. အဲ့ဒါက ဘာကို ပြတာ လည်းဆိုတော့ မိမိတို့ ၀ယ်မဲ့ Laptop မှာ အသုံးပြုမဲ့ Windows အမျိုးအစားကို ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ် .. ကျွန်တော် တို့ အနေနဲ့ Laptop ၀ယ်တဲ့ အခါမှာ ပေးရမဲ့ တန်ဖိုးထဲမှာ အဲ့ဒီ Windows အတွက်ပါ ပါပြီးသား ဖြစ်ပါတယ် .. ကျွန်တော်တို့ Windows ကို ၀ယ်ပြီး သုံးရတာပါ .. Microsoft ® Windows7Home Basic စသည် ဖြင့် ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ် ..
Memory ပမာဏ ကိုတော့ Detail ထဲမှာ Mb နဲ့ ဖော် ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ် . အဲ့ဒီအတွက် Laptop မှာ Ram ဘယ်နှစ် Gb ပါတယ် ဆိုတာကို သိဖို့ အတွက် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Unit ရေတွက် ပုံလေးကို သိထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်...
ဒါမှသာ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ 4096 Mb ဆိုရင်4Gb ၊ 3072 Mb ဆိုရင်3Gb စသည်ဖြင့် အလွယ်တကူ သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. ဒါဆိုရင် မိမိတို့ ၀ယ်မဲ့ Laptop မှာ Ram ဘယ်လောက် ပါတယ် ဆိုတာကို ခွဲခြားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် .. ဒီနေရာမှာ တစ်ခု သိထားရမှာက Laptop မှာ Ram ကို ထပ်ပြီး တိုးလို့ ရပါတယ် .. ဥပမာ ။ ။ ကျွန်တော်တို့က Ram2Gb ပဲ ပါတဲ့ Laptop ၀ယ်ထားတာ ဆိုရင် နောက်ထပ် 1Gb ,2Gb ထပ်တိုးတာတို့ လုပ်နိုင်ပါတယ် ..
ဒီမှာက ဘာကို ကြည့်ရမလည်း ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ၀ယ်မဲ့ Laptop ရဲ့ Screen အရွယ် အစားကို ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. Screen အရွယ်အစား အကြီး အသေးကို လိုက်ပြီး မိမိရဲ့ Laptop အရွယ်အစားကလည်း အကြီး အသေး ကွာသွားပါလိမ့်မယ် .. 14" , 15.6" , 17.3" စသည်ဖြင့် အသီးသီး ရှိပါလိမ့်မယ် .. မိမိတို့ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် နိုင်ပါတယ် ..
Hard Disk မှာ မိမိတို့ ၀ယ်မဲ့ Laptop မှာပါ ၀င်တဲ့ Hard Disk ရဲ့ ပမာဏကို ဖော်ပြပေး ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ် .. 320 GB , 500 GB , 640 GB စသည်ဖြင့် အသီးသီး Hard Disk ရဲ့ Data တွေကို Store လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ပမာဏကို ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
ဒီကောင်လေးကတော့ ဘာမှ အရေးမပါသလိုနဲ့ တော်တော် အရေးပါပါတယ် .. မိမိတို့ ၀ယ်မဲ့ Laptop မှာ Optical Drive ပါမပါတော့ သေချာ ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ် .. ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ Optrical Drive မပါတဲ့ Laptop ကို ၀ယ်မိပြီ ဆိုရင် နောက်ပိုင်း Windows အသစ်ပြန် တင်ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် Software တွေ Install လုပ်ဖို့ အခွေထည့်ချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး .. ဒါကြောင့် Optical Drive ပါတာကို ရွေးချယ် ၀ယ်ယူဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် .. Optical Drive ပါတဲ့ Laptop တွေမှာ DVD-Super Multi Double Layer စသည်ဖြင့် ဖော်ပြထားပြီးတော့ Optical Drive မပါဘူး ဆိုရင်တော့ no ဆိုပြီး ဖော်ပြနေပါလိမ့်မယ် ..
အများစု မသိကြတဲ့ အထဲမှာ ဒီကောင်လေး ပါပါတယ် .. ဆိုင်က ပြတဲ့ Detail ကို ကြည့်ပြီး အများစုက မိမိဝယ်မဲ့ Laptop မှာ Video Card ပါမပါတောင် မသိကြပါဘူး .. Laptop မှာ Video Card မပါဘူး ဆိုရင် ကိုယ့်ဘာသာ အသစ် စိုက်လို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး .. ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝယ်မဲ့ Laptop မှာ Video Card ပါမပါလည်း သေချာလေး ကြည့်သင့်ပါတယ် .. Video Card က Brand နှစ်မျိုးရှိပါတယ် .. Nividia နဲ့ ATI ပါ .. မိမိတို့ ကြိုက်တဲ့ Brand ကို ရွေးချယ် နိုင်ပါတယ် .. တကယ်လို့ Video Card ပါတဲ့ Laptop တွေရဲ့ Detail ထဲမှာ Nividia Geforce ® GT 520MX 1024Mb ၊ ATI ™ Mobility Radeon ™ HD6630 1024Mb စသည်ဖြင့် ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ် .. ဒီနေရာမှာ တစ်ခု သိထား ရမှာက ပါဝင်တဲ့ Graphic ပမာဏ ကို Gb နဲ့ မဖော်ပြပဲ MB နဲ့ ပဲ ဖော်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. 1 Gb ဆိုရင် 1024 MB ၊ 512 MB စသည်ဖြင့် ဖော်ပြပေး မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. တကယ်လို့ Video Card မပါတဲ့ Laptop တွေမှာ ဆိုရင် Intel ® HD Graphics 3000 Intel ® GMA HD စသည်ဖြင့် ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. ဒါဆိုရင် မိမိတို့ ၀ယ်မဲ့ လက်တော့မှာ Video Card ပါမပါ ရွေးချယ် နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ..
ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ လက်တော့ ၀ယ်မယ်ဆိုရင် အဓိကထားပြီး သိထားသင့်တဲ့ ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ အချက်လက် လေးတွေကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် .. ကျန်တဲ့ Wifi , Bluetooth ပါမပါ သူ့မှာပါတဲ့ Battery Card က ဘယ်လောက် အသုံးခံလည်း (2hour ,3hour ) Laptop ရဲ့ အလေးချိန် စတာတွေကိုတော့ ကျွန်တော် တစ်ချက် ချင်း ရေးမပေးတော့ပါဘူး .. အပေါ်မှာ ရေးပေးခဲ့တဲ့ အချက်တွေကို ကြည့်ပြီး Laptop တစ်လုံး ၀ယ်ဖို့ အတွက် အနည်းနဲ့ အများ အထောက် အကူ ပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ..
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ..
ကိုလင်း April 24, 2012 at 1:17 AM
ကိုနေမင်းမောင် ရေ RAM ,က Rum ,Run တွေဖြစ်နေတယ်
နတ်မင်း April 24, 2012 at 10:09 AM
အခုလို အသိပညာပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ညီလေးရဲ့ဆိုက်ကလေးကို နေ့တိုင်းနီးပါးလောက် ပို့စ်တွေကို စောင့်ဖတ်ပြီး အားပေးနေပါတယ်
khu tun April 26, 2012 at 4:38 AM
Intel နဲ့ ADM အကြောင်းလေးပြေားပြပေးပါလား အစ်ကို Intel and ADM ကွားခြားပုံကိုလည်းသိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
khu tun April 26, 2012 at 4:41 AM
sorry မှားလို့အစ်ကို AMD ကိုပြောတာပါ။ ADM နဲ့မှားသွားတယ်။
yan May 4, 2012 at 3:29 AM
အရမ်းကောင်းတဲ့ ၇ှင်းလင် ချက်ပါ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
အောင်သူဖြိုး May 14, 2012 at 6:42 PM
ဒီလိုလူတွေကို laptop ၀ယ်ယူရင် စဉ်းစားဖို့ပေးတဲံ့ အကြံက တော်တော် ကောင်းတယ်ဗျာ
တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ လက်တော. တံဆိပ်တွေနဲ့ အကောင်းအဆိုးလေးတွေပါ ဝေဖန်ပြီးထည်.ပေးရင် ပိုပြည်.စုံလိမ်.မယ်လိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိချင်တာလေးတွေကို အကြံပေးကြည်.တာပါ။
ဗဟုသုတ အရမ်းရပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကို
သိန်ဖေမြင့် October 4, 2012 at 8:50 AM
အစ်ကိုကျေဇူးတင်လိုမဆုံးနိုင်ဘူးသိလာအစ်ကိုနေမင်းမောင် ဘာဖြစ်လိုလဲဆိုတော့ ကွန်းပူတာတစ်းလုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်း ကိုယ်ဝယ်မဲ့အမိူးစာတွေး အချက်လတ်တွေးပြည်စုံမှ ကိုယ်ကိုင်လိုအဆင်းပြေမှာပါ ညီးတိုအတွက် တကယ်ကိုတန်ဖို့ ရှိတဲ့ စားသာတွေးပါအစ်ကို ဘာဖြင့်လိုတန်ဖိုးရှိတဲ့စာသားတွေးလိုပြောရတဲ့အကြောင်ရင်းက
ကွန်းပူတာဝယ်တဲ့အခါမမှာဖိုအတွက်မို့ အရေကြီဆုံပါ ဆော့ဝဲးတွေးမကောင်းရင်ဖြတ်ပစ်းလိုက်လိုရတယ် ကိုဝယ်မဲ့ကွန်းပူတာမကောင်းရင်းတော့ ဆော့ဝဲးတွေးလိုဖြတ်ပစ်လိုရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော ကျေဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်အစ်ကို (ကွန်းပူတာလေ့လာသူတွေးတွက်အရမ်းတန်ဖို့ ရှိပါတယ် ဘာဖြင့်လိုလဲးဆိုတော့
သူငယ်ချင်းတို့ လေ့လာတာကဆော့ဝဲးအမိူးစားတွေးပါ တကယ်အချက်လတ်ကြတော့ သိပ်နာမလည်းကြဘူး)ခုနကကိုပြောသလိုပေါ့ ဆော့ဝဲးမကောင်းရင်ဖြတ်ထုတ်လိုက်လိုရတယ် ကိုဝယ်မဲ့ကွန်းပူတာမကောင်းရင်းတော့ဆော့ဝဲးလို ဖြတ်ထုတ်လိုက်လိုမရဘူး စာတွေးတော့ရေးလိုဆုံမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီလောက်နဲ့ ပဲးအစ်ကိုရေးရင်တော့ပြီအုန်မှာ
မဟုတ်ဘူး ကျေဇူးအရမ်တင်းပါတယ်အစ်ကိုနေမင်းမောင် ညီ... သိန်ဖေမြင့်
မောင်ကောင်းမြတ် October 14, 2012 at 2:25 PM
ကျေးဇူး ပါ အကိုရေ ကျွန်တော် က ဒီ ပို့ စ် ကို အရင် nayminmaung.ifo က ဖတ်ထားတာ မေ့ သွား လို့ ခု လပ်တော့ လေး တစ်လောက်လောက်ဝယ်မလို့ မ၀ယ် တတ်တာ ခု မနည်းရှာ ပြီး ပြန်ဖတ်ရတယ် အကို သိပ် မတတ်နိုင်တော့ အရွေးမှား မှာစိုးလို့ ခု လိုရေးပေးထားတာကျေးဇူးပါဗျာ
nieniezaw February 21, 2013 at 10:46 AM
ချစ်သူ့ မောင် July 7, 2013 at 7:06 AM
thanksssss တွေ အများကြီးယူဗျာ ခင်ဗျားဆီက မ နေတာတွေ များနေပီ အကိုရ.. အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်
Anonymous September 10, 2013 at 4:39 AM
ကိုနေမင်းမောင်ရေ ကျွန်တော် နှစ်လတိတိ လေ့လာပြီးမှ ဝယ်ခဲ့တာတောင် ခုပြောသွားသလောက် ပြည့်စုံအောင်မသိလိုက်ရဘူး ခင်ဗျာ
PAING PAING MIN November 3, 2013 at 1:35 PM
ကျွန်တော်တို့ပြည်ပရောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေ အတွက် 100%အထောက်အကူပြုပါတယ်...
PAING PAING MIN November 3, 2013 at 1:44 PM
ယောန သံ November 4, 2013 at 10:31 AM
Intel နဲ့ AMD ကဘာကွာတာလဲ။အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေအထောက်အကူပြုတာလဲ။ဈေးနှုန်းနေနဲ့ i7 ဆိုရင်ဘယ်လောက်အထိရှိလဲ။Ram မှာဆိုရင်ရော Ram ဘယ်လောက်ဆိုရင် ဘယ်လောက်အထိသုံးလို့ ရလဲ စသဖြင့်ပေါ့နော်။ကျေးဇူးပြုပြီးနည်းနည်းလေးထပ်ရှင်းပြပါဦးခင်ဗျာ။ကို နေ ကျန်းမာပါစေဗျာ။
Anonymous July 17, 2014 at 2:34 PM
Myheartwill go on January 11, 2015 at 11:34 AM
Anonymous January 20, 2015 at 4:49 PM
Soe Myint Thein June 30, 2016 at 4:26 PM
iPhone Smart Guide စာအုပ်နဲ့ Easy iDevice Guide စ...
Samsung Galaxy Core II SM-G355H Root လုပ်နည်း
Daytona Rush Apk v1.8 Mod
Wondershare MobileGo 7.9.0.44 For Pc 68.43 MB
Farm Heroes Saga Apk v2.34.6 Mod (Unlimited Lives ...
Windows 10 & Office 2016 All Editions Activator 1....
Call Record v3.1.4 [Full Apk]
Iobit Protected Folder Pro 2MB
Internet Download Manager ကို Full Version ဖြစ်အော...
CD နှင့် DVD ခွေများဝယ်မယ်ဆိုရင် သိထားသင့်သောအချက်...
Latop ၀ယ်မယ်ဆိုရင် အကြမ်းမျဉ်း သိထားသင့်သော အချက်မ...
You Tube ကနေအလွယ်တကူဒေါင်းလော့ချမယ် ( For Android ...
Duplicate Cleaner 5.0.1.22